Makumi matatu akasarudzwa mitsara nezve enganonyorwa | Zvazvino Zvinyorwa
Hongu, ndiAugust, asi zvirokwazvo pane vanyori vazhinji vari kurova kiyi (kana chinyoreso nebhuku rekunyorera) neruzivo irwo rwavanarwo mupfungwa. Zvakanaka pane yakatsaurirwa izvi kusarudzwa kwemitsara makumi matatu nevanyori vakasiyana pane dudziro uye maitiro e Nyora zvinyorwa.
30 mitsara nezve enganonyorwa
Kunyora novel kwakafanana nekushongedza machira netambo dzemavara mazhinji: hunyanzvi hwekuchengetedza uye kuranga. Isabel Allende
Kutanga kunyora inoverengeka kwakafanana nekuenda kuna chiremba wemazino, nekuti unozvigadzirira mhando yemasamanisi. Sir Kinsley Amis
Basa remunyori ndere kuita kuti zvisingaonekwe zvioneke nemazwi. Miguel Angel Asturias
Iyo inoverengeka yakaenzana pakati pezvishoma zviono zvechokwadi uye huwandu hwenhema hunoumba izvo vazhinji vedu tinodana hupenyu. Sauro anopopota
Iwo manotsi haasati anyorwa nevanopfuura ivo vasingakwanise kurarama navo. Alexander Casona
MuBhudha haatombogona kunyora bhuku rinobudirira. Chitendero chake chinomuraira: "Usave neshungu, usataure zvakaipa, usafunge zvakaipa, usatarise zvakaipa." William Faulkner
Kunyora novel kwakafanana nekufamba nyika yakakomberedzwa nevanhu. Maria Granata
Zvese zvinoraramwa kana kunzwa nemunyori wenhau zvinozokonzeresa moto usingagutsike inova nyika yake yekunyepedzera. Carmen laforet
Vanyori vekare venhau, ivo vakuru chaivo, vakakosha maererano nehunhu hwevanhu hwavanosimudzira, kuziva kwekugona kwehupenyu. R. Levis
Panguva iyo gwaro nezvenguva yedu uye chirevo chematambudziko emurume wemazuva ano, inoverengeka inofanira kukuvadza hana yenzanga ine chishuwo chekuivandudza. Ana Maria Matute
Iyo novel ingangoita yePurotesitendi fomu fomu; icho chibereko chepfungwa dzakasununguka, chemunhu akazvimiririra. George Orwell
Ini ndinonyora zvinyorwa zvekutangazve hupenyu nenzira yangu. Arturo Perez-Reverte
Kana iwe ukatakura shamwari dzako munhoroondo yako yekutanga, vanozogumbuka, asi ukasadaro, vanonzwa kutengeswa. Modhekai Richler
Novelists ndivo vachengeti vemasuo ezvinyorwa. Monstserrat Roig
Zvakaitika zvakandidzidzisa kuti hapana zvishamiso mukunyora - kungoshanda nesimba. Izvo hazvigoneke kunyora yakanaka novel ine tsoka yetsuro muhomwe yako. Isaac Bashevis Muimbi
Muverengi anogona kutarisirwa semutambi mukuru wenyaya, panhanho yakaenzana nemunyori; pasina iyo, hapana chinoitwa. Elsa triolet
Ndini novel. Ndiri nyaya dzangu. Frank kafka
Iyo yakanaka novel inodzora muverengi kure. Carlos Fuentes
Hupenyu hwakafanana neruzivo kakawanda kupfuura zvinyorwa zvakafanana neupenyu. George Sand
Ruzivo rwese ruzivo rwekunyora; chinomiririra nyika, asi chenyika iyo munyori wenhau akawedzera chimwe chinhu: hasha dzake, kushuva kwake, kushoropodza. Mario Vargas Llosa
Kwandiri, kunyora inoverengeka kutarisana nemakomo marefu uye kukwirisa madziro ematombo uye, mushure mekurwa kwakasimba uye kunotyisa, kusvika pamusoro. Zvipfuure kana kurasikirwa: hapasisina dzimwe sarudzo. Pese pandinonyora bhuku refu ndave nemufananidzo iwoyo wakanyorwa mupfungwa dzangu. Haruki Murakami
Parizvino vaverengi havana mukana wekutonga ini nenhau yangu mudare rakaomesesa riripo, ndiko kuti, mumoyo mavo uye muhana dzavo. Semazuva ese, iyi ndiyo dare yandiri kuda kutongwa nayo. Wassily Grossman
Zvese zviri munganonyorwa ndezvemunyori uye ndiye munyori. Carlos Castilla del Pino
Ndinoedza kugadzira zvinyorwa zvinoita kuti vanhu vasagadzikane maererano neizvo nzanga yedu inotora sezvisina basa. John irving
Ndine chakakosha pakati pese pfungwa yekuti novel harichisiri basa revaraidzo chete, nzira yekunyengedza zvinofadza maawa mashoma, anosvika kumagariro, kwepfungwa, kudzidza kwenhoroondo, asi pakupedzisira kudzidza. Emilia Parto Bazán
Kupedzisa novel chinhu chinoshamisa. Iyo yakareba inotora kunyora magumo, ndipo pandinotambura zvakanyanya. Kubudirira kumagumo enoverengeki kune chimwe chinhu chekupomba, nekuti iwe wakwanisa nacho. Kuipedza kwakafanana nekubviswa pamba pako. Ndinoreurura kuti imwe yenguva dzinotyisa dzehupenyu hwangu izuva rekupedzisa bhuku. Almudena Grandes
Mumanoveli angu mune zvese izvo dzimwe nguva ndaisaziva mararamiro. Idzo nguva dzakapfuura uye mandingadai ndakada kutora rimwe danho. Nhoroondo inokutendera kuti ugadzirise iyo nguva yehupenyu yawakarasikirwa, nekukurumidza. Idzo nguva apo iwe unoda kugona kusarudza ipapo ipapo uye woti, "Hongu, ngatizviite," uye kazhinji hazviitike. Iyo inoverengeka inokutendera iwe kuti udzokere uye uite sarudzo chaiyo. Federico Moccia
Ndinoedza kuti enganonyorwa angu mabasa ounyanzvi, senhetembo huru, pendi yakanaka kana bhaisikopo rakanaka rinogona kuva. Ini handifarire zvematongerwo enyika kana zvetsika nyaya. Chandinongoda kugadzira chinhu chakanaka uye kuchiisa pasi. John banville
Ini ndinofungidzira kuti nganonyorwa dzese, pakupedzisira, kuyedza kuteya pasi rese mubhuku, kunyangwe kana "nyika yese" iwe uchingoreva chidimbu, kona, tambo inoitika sekondi. Laura Restrepo
Iwo manotsi haatangi sekuda kunoita munhu, asi sezvavanoda. Gabriel García Márquez
mabviro: Zana remakore rekufambidzana. José María Albaigès Olivart naM M. Dolors Hipólito. Mupepeti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » 30 mitsara yakasarudzwa pamusoro pemanoveli